Ny Redmi 9i dia havoaka amin'ny 15 septambra miaraka amin'ny vidiny 90 euro | Androidsis
Ny Redmi 9i dia efa manana daty fandefasana ary finday tena mora vidy manaraka
Xiaomi dia efa manana ny finday avo lenta ambany manaraka, iray izay tsy ho ela dia hiakatra amin'ny tsena ho iray miaraka amin'ny vidiny ambany indrindra ary mikendry ny ho iray amin'ireo safidy mividy manintona indrindra ho an'ireo mpanjifa izay tsy mody manana fitaovana manana ny tsara indrindra inona no tsara kokoa, fa izay mahafeno ny fanantenana kely indrindra omen'ny finday mora vidy rehetra.
Raha ny fanontaniana dia miresaka momba izany isika Redmi 9i, ilay maodely izay haseho ary hatomboka amin'ny fomba 15 septambra. Ity dia modely iray hafa izay hanampy amin'ny kinova samihafa an'ny Redmi 9 tany am-boalohany, izay natomboka telo volana lasa izay.
Ho tonga ny 9 septambra ny Redmi 15i: ho latsaky ny 100 euro ny vidiny
Vao tsy ela akory izay, ho ampahany amin'ny fanombohana tsikelikely izay notanterahin'i Xiaomi manerantany momba ny fiovaovan'ny Redmi 9, ny smartphone namoaka smartphone Redmi 9 prime y Redmi 9A -ary koa ny Redmi 8 tenany- any India. Ora vitsy lasa izay, nanamafy tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter Redmi India ny orinasa fa handefa ny finday Redmi 9i ao amin'ny firenena izy amin'ny 15 septambra. Ny vidiny dia eo amin'ny 7.999 ropia, sandany izay mety handika hatramin'ny 92 euro.
Ny bitsika Redmi 9i navoakan'ny orinasa dia manamafy fa ho avy ny telefaona miaraka amin'ny fisehoana notch waterdrop sy RAM 4GB; Raha jerena ity angona farany ity, na dia mbola tsy misy ofisialy momba izany aza, ny habaka fitahirizan'ilay fitaovana dia 32 GB ary, amin'ny tranga tsara indrindra - raha misy izy-, eo amin'ny 64 GB. Mazava ho azy, ny telefaona dia hanohana ny fanitarana fahatsiarovana ROM amin'ny alàlan'ny karatra microSD. Ho setrin'izany, hovidiana ny finday ao amin'ny Mi.com India sy Flipkart, ireo sehatra an-tserasera roa izay anoloran'ilay orinasa ny vokatra any amin'ny firenena goavambe Aziatika.
Ny pejy fandraisana an-telefaona finday izay efa misy ao amin'ny mi.com dia nanambara ihany koa fa ho tonga miaraka amin'ny bateria lehibe izy - eto dia afaka miatrika fahaiza-manao 5.000 mAh isika, azo antoka -, fakan-tsary sy fahaiza-manao lalao tsara kokoa. Inona koa, ho avy apetraka mialoha miaraka amin'ny MIUI 12, ny kinova farany an'ny sosona marika.
? Entertaℹ️nment & excℹ️tement dia samy ho anao! ?# Redmi9i - dia manomboka amin'ny 1 Septambra5⃣ amin'ny https://t.co/cwYEXdVQIo & @flipkart!
Bitsika ny 'ℹ️ VONONONDRO' raha toa ianao mientanentana amin'ny fandefasana toa anay! #BigOnEnteriwan
? Ampandrenesina: https://t.co/inhuC48t0k pic.twitter.com/AusAjT0l89
- Redmi India - Tonga eto ny #RedmiSmartBand! (@RedmiIndia) Septambra 9, 2020
Tamin'ny faran'ny volana lasa teo, ny vavahady Pricebaba dia nanambara fa hanangana telefaona Redmi 9i any India i Xiaomi, zavatra izay, rehefa nilaza izany, dia ho tanteraka amin'ny farany. Ny famoahana, izay mitanisa ny vaovao azo avy amin'ilay mpanolotsaina fanta-daza Ishan Agarwal, dia ho hita amin'ny karazany hafa toy ny 4 GB RAM + 64 GB fitehirizana ary 4 GB RAM + 128 GB fitehirizana, izay mihoatra ny vinavinany nantenainay tamin'ny iray amin'ireo ireo fehintsoratra hitantsika etsy ambony. Ny telefaona dia ho hita amin'ny fanontana miloko toy ny Nature Green, Sea Blue, ary Midnight Black.
Amin'izao fotoana izao, inona ny nofaritana, na dia misy fanohanana mitohy aza, satria tsy ofisialy, dia tsy azontsika raisina ho toy ny zavatra ofisialy. Tsy maintsy miandry ny fahatongavan'ny 15 septambra isika vao hahalala izay rehetra nisy sy hanana ny Redmi 9i. Toy izany koa, ny daty toy izany dia tsy lavitra; raha ny fanontaniana dia 6 andro fotsiny sisa no hiandrasantsika.
Raha ny antsipiriany momba ny fandefasana sy ny fisian'ny any amin'ny firenena hafa, ny finday dia tsy voamarina fa atolotra amin'ny tsena manerantany. Na izany aza, tsy antenainay ny hanaovan'ny Xiaomi azy tsy ho ela aorian'ny fandefasana azy any India. Matetika ny marika dia mamoaka telefaona ao amin'io firenena io aloha, ary avy eo mandefa azy any amin'ny faritra hafa.
Raha te hanana hevitra somary akaiky ny zavatra horaisintsika amin'ny Redmi 9i, dia holazainay ny tena mampiavaka ny Redmi 9, satria ity finday vaovao ity dia somary ambany kokoa ny famaritana ara-teknika.
Ny Redmi 9 dia fitaovana iray miaraka amin'ny efijery IPS LCD 6.3-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD +, mpiorina 80 GHz octa-core Mediatek Helio G2.0, RAM 3/4/6 GB ary 32 / 64/128 GB. 5.020 mAh ny bateriny. Ny fakan-tsary any aoriana izay entiny dia quadruple sy 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP ary 8 MP kosa ny sensor eo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Redmi 9i dia efa manana daty fandefasana ary finday tena mora vidy manaraka
Android 11 no eto ary ny vaovao 11 lehibe indrindra
Ahoana ny fomba hamafana ny tarehy amin'ny horonan-tsary amin'ny fampiharana PutMask